Hiompana amin »ny ara-pahasalamana amin’ny alalan’ny tanjona iraisana dia ny fampihenana ny taham-pahafatesan’ny reny sy ny zaza malagasy ary hampiroborobo ny fahalalan’ny reny mitaiza. Efa 20 taona nisiana teto amintsika ny Pavillon Sainte Fleur, toeram-pitsaboana mandray ny reny sy ny zaza malagasy, izay tantanin’ny Ordre de Malte hita amina firenena 26, raha ny fanazavan’ny Talen’ny Pavillon Sainte Fleur, Eric de La Rochefoucauld. Manana mpiasa 110 eo, ka mahatratra 3200 isan-taona, ary mahavita fampiterahana amin’ny alalan’ny fandidiana 1200 eo ho eo isan-taona ihany koa. Hanampy ny Jejoo amin’ny tolo-kevitra momba lahatsoratra mikasika ny fahasalamana, indrindra fa momba ny reny sy ny zaza ny Pavillon Sainte Fleur, ary hanao fanentanana amin’ny alalan’ireo mpankafy azy mivondrona ao anatin’ny « Club Jejoo » kosa ny Jejoo ary tsy hikely soroka amin’ny asa sosialy azo atao, hoy ny tonian-dahatsoratra, Lala Tiana Ramalanjaona. Herintaona ny fifanarahana ary irariana mba hitohy sy hihamafy, hoy hatrany izy. Ao anatin’izao fanamarihana ny faha-20 taonan’ny Pavillon Sinte Fleur izao ihany koa, dia ny Jejoo no hiantsoroka betsaka ny serasera samihafa. Hisy ny fanompoam-pivavahana iraisam-pinoana hatao ny 11 oktobra izao eny amin’ny tokotaniben’ny hopitaly HJRA, arahin’ny lanonana hatao eny amin’ny Espace Yandi By-Pass ny 7 novambra. Hanao asa sosialy ho an’ireo mpiasan’ny Pavillon Sainte Fleur amin’ny alalan’ny fitsidihana ny Akamasoa sy ireo ankizikely mitsabo tena noho ny homamiadana ao amin’ny hopitaly HJRA. Hanome ra an-tsitrapo ho an’ny foiben’ny fitahirizan-dra ao amin’ny HJRA, izay isan’ny manampy betsaka ny Pavillon amin’ny asa iantsorohany.